राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आग्रह प्रर्ती किन नाजवाफ छिन मेलानिया ट्रम्प ? «
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आग्रह प्रर्ती किन नाजवाफ छिन मेलानिया ट्रम्प ?
प्रकाशित मिति : 16 July, 2019 9:17 am
वाशिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीका चारजना सांसदलाई आफू आएकै मुलुकमा फर्किन आग्रह गरेको प्रसंगमा उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प भने मौन देखिएकी छन् । मेलानिया अमेरिकाको दोस्रो राष्ट्रपतिकी पत्नी हुन् जो विदेशमा जन्मेकी हुन् । यसअघि तत्कालीन प्रथम महिला लौइसा आडम्सपनि अमेरिकामा जन्मेकी होइनन् । उनी लण्डनमा जन्मेकी हुन् ।
सीएनएनले राष्ट्रपतिको भनाइका बारेमा ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी स्टेफानी ग्रीसममार्फत टिप्पणी गर्न आग्रह गरेकोमा जवाफ आएन । ग्रीसामले सोमबार ट्विट गर्दै राष्ट्रपतिले अमेरिका विश्वकै महान राष्ट्र भएको बताएको जनाएकी थिइन् । जो यहाँ बस्न चाहँदैनन् उनीहरु जान सक्ने बताएको भन्दै व्याख्या गर्न खोजेकी छन् ।
मेलानिया स्लोभेनियामा जन्मेकी हुन् । जुन पहिलाको कम्युनिस्ट शाषित मुलुक युगोस्लाभियाबाट टुक्रेर बनेको मुलुक हो ।
स्लोभेनिया सन् १९९१मा स्वतन्त्र भएको हो । त्यतिबेला ट्रम्प २१ वर्षकी थिइन् र उनले त्यसैताका देश छोडेकी थिइन् । त्यसपछि उनी आफ्नो मोडेलिङ्ग करियरका लागि इटाली र फ्रान्स गइन् । अन्तिममा उनी न्यूयोर्क शहरमा पुगेकी हुन् । त्यहाँ पुगेपछि उनको रियल स्टेट व्यापारी डोनाल्ड ट्रम्पसँग सन् १९९८मा भेट भएको हो । उनले ट्रम्पसँग सन् २००५ मा विवाह गरेकी हुन् । त्यसको एक वर्षपछि उनले अमेरिकाको नागरिकता पाएकी हुन् ।
उनका आमा बाबु भिक्टर र अमालिजा कान्भसपनि ‘चेन माइग्रेसन’ प्रक्रिया मार्फत छोरीको कारण अमेरिका गएका हुन् । जुन प्रक्रियालाई अहिले ट्रम्पले आपत्ति जनाइरहेका छन् । मेलानियाका आमाबाबुलाई अगस्ट २०१८मा अमेरिकाको नागरिकता दिइएको हो । उनीहरुको ग्रीनकार्डको लागि मेलानियाले नै स्पोन्सर गरेको बताइएको छ । (सीएनएन)